Teboka famantarana #4 : Lalana, tontolon’ny herisetra | Grandir à Antsirabe
Teboka famantarana #4 : Lalana, tontolon’ny herisetra
#4 – LALANA : TONTOLON’NY HERISETRA
Ireo ankizy izay nametraka paik’ady hivelomana eny amin’ny lalana (Teboka famantarana faha 3) dia miatrika herisetra amin’ny endriny isan-karazany.
Tsy misy fiarovana izy ireo ary tsizarizary manoloana ny tontolon’ny lalana.
Ireo karazana herisetra :
1/ Herisetra amin’ny fitsarana ivelany sy ny fanilihan’ny fiaraha-monina
Ny fitsarana ivelany ny ankizin’ny lalana (tsarain’ny fiaraha-monina hoe ratsy taiza sy maditra) dia avy amin’ny tsy fahalalana ny zavatra iainan’ireo ankizy.
Voailika izy ireo noho ny famaritana izay napetraka taminy.
2/ Herisetra ao anatin’ny vondron’ireo ankizy
Ireo herisetra amin’ny samy ankizy ireo – mahery setra, sinto-mahery, mifanompa na mifamono – dia avy amin’ny alalan’ny fiovan’ny fijeriny ny tenany sy ny fijeriny ny hafa.
Io fiovana io dia fiovana tsy afa-miala amin’ny fiainana eny amin’ny lalana ary tafiditra ao anatin’ny dingan’ny fivaonana amin’ny rafitra sosialy, izay hitantsika ao amin’ny teboka famantarana manaraka.
3/ Herisetra ateraky ny tsy fitoviana
Io endrika herisetra io dia tsy hita ary tsy hay faritanamazava anefa izy no anisan’ny ratsy indrindra ary tena manimba tanteraka rehefa mandeha ny fotoana. Izany dia vokatry ny fahatapahan’ny fifandraisana amin’nyhafa, ireo izay tsy avy « eny amin’ny lalana ».
4/ Herisetra vokatry ny hery famoretan’ny mpitandro filaminana
Io herisetran’ny mpitandro filaminana io dia miseho amin’ny endriny isan-karazany arakaraky ny firenena. Teraka avy amin’ny alalan’ny fitsarana ivelany ataon’izy ireoamin’ireo ankizy.
Lire aussi : Fandaharan'asan'ny Trano fampiantranoana vonjimaika (CHT)
MG	Teboka famatarana #3